Julaị 28-30th ngosi ihe ngosi China China nke 18 na Polyurethane (PU China 2021/ UTECH Asia) na Ngosipụta Mba na Mgbakọ Mgbakọ (Shanghai), na-abịa na njedebe nke ọma. PU China/UTECH Asia na -enye ndị ọkachamara ihe polyurethane ohere zuru oke iji ...
Atụmatụ atụmatụ mberede mberede zuru oke maka ihe ọghọm kemịkal dị ize ndụ
A na -eme mmemme mberede mberede zuru oke na mpaghara ihe egwu dị na ugbo tank. Egwuregwu ahụ sochiri ọgụ ọgụ n'ezie, na -elekwasị anya n'ịmepụta mgbapụta ihe, nsị ndị ọrụ na ọkụ n'ime ugbo tankị dị nso n'oge a na -ebudata na ibudata gwongworo ...
Mmepụta mmekorita bụ usoro njikwa dị irè maka ụlọ ọrụ ahụ, ka ndị ọrụ kwụrụ ụgwọ ghara ịta ahụhụ, wee kpalie ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ọrụ. A rụpụtala ezigbo ihe kemgbe im ...
Maazị Han Zhigang, odeakwụkwọ nke Alaka pati nke ụlọ ọrụ ahụ na onye isi oche…
Enyere Mr Han, odeakwụkwọ nke ngalaba otu ụlọ ọrụ ahụ na onye isi oche nke Board aha "Onye ọchụnta ego pụrụ iche nke ncheta afọ iri anọ nke mgbanwe na mmeghe na Zibo City". Ọ ...
Ozi ọma: Longhua New Materials Co., Ltd. na onye isi oche Han Zhigang nọ na ndepụta nke…
Ozi ọma: Longhua New Materials Co., Ltd. na Onye isi oche Han Zhigang nọ na ndepụta ụlọ ọrụ pụtara ìhè na ndị ọchụnta ego pụtara ìhè n'otu n'otu: ịtọ ntọala ọhụrụ maka mmepe dị elu nke mpaghara! Daysbọchị ole na ole gara aga, na nkwekọrịta ...